Qaar kamid ah Xildhibaanada Labada Aqal oo lacagahii ay ka heleen Doorashada Madaxweynaha ku isticma.aalay – Xeernews24
Qaar kamid ah Xildhibaanada Labada Aqal oo lacagahii ay ka heleen Doorashada Madaxweynaha ku isticma.aalay
18. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Tan iyo waxii ka dambeeyay markii ay dhacday doorashada Madaxweynaha Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho isaga tagay qaar badan oo kamid ah Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanadan oo u badan kuwa heesta baasabooro Ajaaniib ah ayaa ka dhoofay magaalada Muqdisho waxa ayna badankood aadeen wadamada dariska sida dalakka Kenya, Itoobiya iyo Uganda, halka kuwa kalana ay aadeen Wadamado Yurub ku yaala.
Sida aan xogaha ku heleyno Xildhibaanadan ayaa horey jeebka ugu sii qaatay lacago badan oo kamid ah lacagihii kasoo galay doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya, waxa ayna Xildhibaanadan lacagahaasi ku qarashgareenayaan kuna isticmaalayaan wadamada ay aadeen.
Magaalada Muqdisho ayaan si fiican looga dareemin lacagihii badnaa ee magaalada soo galay lana siiyay badi Xildhibaanada labada Aqal, Xildhibaanada ayaana lacagahaasi ka dhigay kuwa ay akoono iyo qasnado ku shubtaan iyo kuwa dalka dibadiisa la aadeen si ay ugu soo isticmaalaan.
Xildhibaanada Qaarkood ayaa magaalada Muqdisho uga cararay eheladooda iyo asxaabtooda si aysan uga shaxaadin lacagihii ay ka heleen Doorashada Madaxweynaha, waxaana Xildhibaanada badi la sheegay in doorashada ka heleen lacag ka badan Boqol kun Dollar .
Sida aan Wararka ku heleyno Xildhibaanada labada Aqal oo badankood gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa joogitaankooda si weyn looga dareemay magaaladaasi, waxa ayna inta badan degeen Hoteelo qaali ah ay ku bixinayaan qarash badan.
Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood ayaa waxaa lacagaha ay la tageen magalaada Nairobi ka faa’iiday oo shaxaad badan ka helay qaar kamid ah saaxiibadooda iyo eheladooda oo magaaladaasi ku sugnaa
Magaalada Muqdisho waxaa hada ku sugan Xildhibaano tiro yar kuwaa oo magaalada u jooga qal qaalada Xilka Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya uu soo magacaabayo Madaxweynaha iyo sidoo kale Golaha Wasiirada ee iyana lasoo magacaabi doono.
Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hada ku jira fasax kooban, waxa ayna Xildhibaanada ka nasanayaan Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo intii ay socotay la kulmeen dhafar badan iyo daal.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/doolaar.jpg 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-18 11:45:212017-02-18 11:45:21Qaar kamid ah Xildhibaanada Labada Aqal oo lacagahii ay ka heleen Doorashada Madaxweynaha ku isticma.aalay
Shabakadda Wararka Alleastafrica Oo Baahisay Xogo Sheegaya In Ganacsade Cabdiraxmaan... Ururka Ramad oo Seminaar wax barasho u qabtay Skuulada Saylac iyo Xariirad